Karaan jaldeessaa hallayyaan nama ga’a የዝንጀሮ መንገድ ከዋሻ ያደርሳል : – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsKaraan jaldeessaa hallayyaan nama ga’a የዝንጀሮ መንገድ ከዋሻ ያደርሳል :
Karaan jaldeessaa hallayyaan nama ga’a የዝንጀሮ መንገድ ከዋሻ ያደርሳል :
Karaan jaldeessaa hallayyaan nama ga’a
የዝንጀሮ መንገድ ከዋሻ ያደርሳል
Uummati Oromoooo Dr. Abiyyiin nagaatti kan jedhe fakkaata. ODP irraas abdii kutachuu hin oolle. Dhaabich diigamee osoo obbaafate akka filatu dubbata. .
Dr Abiyyi garuu ODP ii diiguuf kan murate uummata Oromoof yaadee miti. ODP iin yoo oolte bulte Oromoo ta’uu dandeessi sodaa jedhu waan qabuuf malee. Seexaa ODP iin hin qabne itti hora jettan mitii ? Kkkkk /.
Sababni Dr. Abiyyi ODP ii isa guddise diiguuf muddame maalumaafi ree? kan waa’ee aadde Zinnaash odeeffamu malee akkuma kutaa 1 keessatt tuqame sababa gurguddaa lama qaba.
Inni jalqabaa shira isaatti Oromoon waan dammaqeefii dha. Harraba dhadhaa dibatee harka lafa jalaan Oromummaa irratti duulaa ture. Haasaa damma damma jedhu haasa’uun qeerroo goyyoomsuuf ture. Garuu hin taaneef. Oromoon bule cooma jedheetu malee wallaalee hin turre.
Amboo dhaqee “New work ” Oromiyaa goona jedhee baace. Kan ta’aa jiru garuu waan biraati. Amboo biyya gootaa irra dhaabbatee qeerroo kan faarse garaa isaa irraa hin turre. Harrabaan ni faarsa. Laphee isaan garuu itti farrisa ture. Harrabni isaa qeerroon gaachana jedha.Lapheen isaa garuu xannacha koo ti jedha. Harrabaan qeerroo waliin duulla jedha gochaan garuu qeerrootti duula. Harrabaan qeerroo waliin duuna jedha. Qabatamaan garuu qeerroo ajjeesisaa oolee bula.
Qotee bulaa beeluu fi dheebuu isa baase gane.Haannan isa hobaase, dhadhaatti faffatee harka afaan kaa’ee ciniine. Loltuu bobbaase. Abbaa fi ilma waliratti ajjeesise.Haadhaa fi hintala gudeechise. Loltoonni inni bobbaase gara laafina tokko malee maatii guutuu fixu. Yakka duguuggaa sanyii raawwatu. Ijoollee Oromoo ajjeesuun rikoordii cabsuuf deema.Gidiraan bara sirna habashootaa Oromoo irra ga’e marti yoo iida’ame kan inni raawwate waliin wal hin gitu kan jedhan heddummachaa jiru.
Obsaan Haannan goromsaa dhugaan uummata Oromoo aarsaa guddaa kaffalchiise. Kaffalchiisufis deema. Abiyi Oromoon shira isaa hubachuu fi obsas fixachuu isaa hubate. Haala kanaan Oromiyaa keessatti filatamuu akka hin dandeenye mirkaneeffate.Kanaaf aangoo irra turuuf carraa tokko qofa qaba. Innis paarticha diigee kan biraatti makuu.
Inni 2ffaan Abiyyi qaamaan ODP/OPDO haa turu malee sammuun miseensa dhaaba biraa ture / ti jedhu.Seenaan kun jalqabuu fi aadde Zinnaash waliin gaa’ela raawwachuun wal irraa hin fagaatu jedhu. Bara Paartiin “Qinijjit” jedhamu irraa eegalas jedhama.Kan sana dura jedhanis xiqqoo miti.
” Qinijjiti ” namoota isaa ኢሕአዴግ ቁጥር 1 keessatti horachaa ture . Abiyyiinis Oggas argata. Miseensa godhatees waliin hojjechuu jalqaba. Iccitii gurguddaas baasee warra G 7 tiif kennaa turuu Andaargachew Tsigee dhugaa ba’eera.Pirezidantii Ertiraa araaraaf kan amansiise illee iccita kana itti himuun akka ture dubbata. Abiyyi waliin hojjetaa turuu isaanii jechuu dha. Abiyyis Andaargaschoon mana hidhaatii hin hiikamu taanaan aangoon gadi dhiisa kan jedhe lafaa ka’ee miti.Gocha kana lamaan waakkatees deebii hin laatne. . Maqaa profeser Biraanuu Naggaa bakka deeme hundaatti waamuunis kanumaafi fakkaata..Har’as Abiyyi maqaa ODP tiin aangoo haa qabatu malee kan biyya bulchaa jiru paartii ኢዜማ waliin ta’uun ifa galaa dha..Gochaan isaas kanuma mirkaneessa. % 100 miseensa ኢዜማ ti. Hoogganaa ኢዜማ ti.Haasaan miseensota ODP ii biraan haasa’anii fi kan Abiyyi kan wal faallessu kanumaafi akka ta’e tilmaamuun nama hin dhibu.
Abbiyyi ejjennoo kana har’a kan qabate miti.Kan dhoksaan dalagaa turee dha. Isa dhoksaan hojjechaa ture dhoksachuu hin dandeenye.Ykn aangoo isaa waan abdateef dhoksuu hin barbaadne.
Yeroon itti ODPiin guutumaa guututti diigamuu qabu amma ta’uu paartii isaa ኢዜማ waliin murteesse. Yeroo kana kan filataniifis qeerroon yeroo itti laafee jiruudha jedhaniitu.. Mallatoo qeerroon darbee darbee agarsiisuu garuu nagaa isaan dhorke. Ni sodaatan. Utuu leenci rafe hin dammaqin dursuu isaanii ti. Utuu qeerroon Oromoo jabina isaa waggaa dura tureetti hin deebi’in ta’uu akka qabu waliigalan.
Qeerroo fi qarree Oromoo adda qooduuf qarshiin dhangalaasan nama rifachiisa. Amma tokkos ittiin milka’aniiru jechuun ni danda’ama. Oromoon Maccaa fi Gujii jitaatu oggaa dhumu oromoon bakka biraa jiraatu callisuu irra darbee gocha yakka duguuggaa sanyii kana akka deggeru gochuu danda’ee ture.
Oolee bulee garuu dhugaan ifa ba’aa dhufe. Kun Dr. Abiyyiinis ta’e ኢዜማ baay’ee sodaachise.Deggersi gadi bu’aa mormiin ammoo haala hin eegamnern saffisaan dabale. Mormiin har’aa boretti dabalaa dhufe kun yeroo hin beekamnetti uummata dirreetti baasuu akka danda’u sodaatan.Sochii uummata keessa jiru kanatti miseensoti ODP fi poolisoonni Oromiyaa akka itti hin dabalmnes sodaatan. Balaa guddaan itti dhufaa jiru isaan cinqe. Guyyaan guyyaa dhalaa kan deemu yoo ta’e rakkoo cimaa keessa akka seenan waliigalan.
Kan nama dhibu garuu miseensonni ኢሕአዴግ walitti baquu mitii araagarummaa qaban illee hin dhiphisine. Garuu tokko gochuuf itti ciche. ODP ii keessaa Kan kana irratti gufuu ta’uu danda’u jedhamanii shakkanis baay’ee isaanii karaa irraa kaasaniiru. Kan hafes gara laafina tokko malee itti fufsiisaa akka jiran adeemsi isaanii dhugaa ba’a
Koree hojii raawwachiistuu ODP keessatti garaagarummaa uumamaa jirus humna “Ripublic guard ” jedhamuun ukkaamsuuf yaalaa jiru.Aadde Xayibaa Hasan irra rakkoon ga’e kana irraa kan fagaatu miti. Kan Komiishinar Dachasaas bullee dhageenya.
Seenaan bara 1993 A.L.Htti Wayyaanee keessatti raawwate ODP keessatti dhufuuf deema. Yeroo sanatti gareen Issiyyee faa garee Mallasiin mo’atee ture. Issiyyeenfaa moonee jirra jedhanii mana dhugaatii/ ragadaa sirba deeman. Mallas garuu Abboyi Sibahat waliin ta’uun aangoo qabutti fayyadamee Abbayi Tsayyee fi Hasan Shifaa sodaachisuun ofitti dabale.Injifannoos ofitti deenbisan . Ija ashaboon dhiqsanii nutu mo’e jedhan. Shira xaxuun Issiyyeefaa warra aangoo waraana lafoo fi qilleensaa of harkaa qabu illee tajaajilaa ala taasisan.
Kan ODP garuu uqqubii nyaatame ta’uu hin oolu. Dr.Abiyyi nama isaa bakka fedhu ka’ateera. Kanaafuu kan yaadaan adda ba’an humna kan qaban hin fakkatu. Humni meeshaa waraanaa fi loltuu yoo ta’e jechuu dha. Kun herrega Abiyyii fi ኢዜማ ti.
Humni kan uumaa fi uummataa ti.Kun dhugaa ta’uu yeroo gabaabduu keessatti dagatee faallaa qabsoo uummata Oromoo dhaabbachuun isaa nama dhiba.
Federaalizimii diiguu kan balaaleffatu uummata Oromoo qofa miti. Uummati Sumaalee,Affar,Tigiraayi, Sidaamaa, Walayittaa,Haadiyyaa fi uummati sabaa fi sab -lammoota kibbaa marti ni mormu. Saba tokko qofa qabatanii warra kaan irratti fe’uuf deemuun nageenya miti. Kun abaarsa.Karaa qajeeltoo miti.Karaan jaldeessaa qileen nama ga’a akkuma jedhamu karaan qabatte kun karaa si galafatu ta’uu qalbi itti hubattu siif haa kennu . Yoo beekaan na qofa jettes cala’i siin jenna.
Yoo gurra qabaatteef karaan ኢዜማ waliin eegalte karaa jaldeessaa ti.Qileetti si oofaa jira.
Karaan Dugda lukkuu isiniif haa ta’u.
መንገዱን ጨርቅ ያድርግላችው
ODP iin dhaabota biraa waliin walitti baquuf leenjii fudhataa akka jiru dhaga’amaa jira.Kana jechuun maqaa Oromoo ofirraa gatuuf deema jechuu dha.Gochaan ODP kun waa tokko na yaadachiise.
Hiriyyaa oogoummaa / የሙያ ባልደረባ jedhamu sana/ tokkon qaba ture.Har’a maqaan isaa Olyaad Gaaddisaa jedhama. Duraan maqaan isaa kan habashaa ture.Dargaggeessi kun sabboonaa gameessa.Maqaa isaa gara maqaa Oromootti kan deebifate har’a miti.Jabana baalaa fi mukti Oromoo fakkaatu kana keessatti miti.Oolee bubbuleera.Bara namni baay’een ayyaanni Irreechaa jiraachuu hin beekne hin hafu ture.
Guyyaa gaafa tokkoo mooraa Mana Murtii Waliigala Oromiyaa keessa abukaatota baay’ee taanee beellama dhaaddachaa eeggachaa turre.Haasaa gidduutti maaliif maqaa isaa akka jijjiirrate gaafatame.Ol’yaadis akkas jedhee deebise፡-
“Sababi isaa haa turu. Garuu waa tokkon isiniif mirkaneessa.Kan warra habashaa waliin walnaquunnamsiisu maqaa kana qofa ture.Maqaa kanaan Alatti Aadaan,safuun, amantiin wal hin agarru.Funyoo qalloon walitti nu hiitee turte maqattii isaanii sana ture.Kunoo isas ofirraa gateera. ” nuun jedhe.
Kun qoosaa haa fakkaatu malee gochaa ODP waliin wal natti fakkaata.Osoo Obbo Lammaa Magarsaa dhufee dhaaba Oromoo hin fakkeessin dura ODP ii Oromoo waliin kan walquunnamsiisu maqaa isaa qofa ture. Oromoon waamamuun ala dhaaba Oromoo ture jechuun nama rakkisa. Oromoof osoo hin taane Oromoo irratti kan hundaa’ee dha.Meeshaa bilisummaa osoo hin taane meeshaa gabrummaaf tolfame ture.
Hanga gaafa Lammaa Magarsaa aangootti dhufuutti gooftaan isaa uummata Oromoo osoo hin taane alagaa isa uumee ture.
Gochaaleen suukanneessaa waggaa 27 guutuu Oromoo irratti raawwatamaa ture jereenya OPDO tiin ala hin milkaa’u ture.Jecha salphaan ibsuuf Oromoon mana hiidhaa guutuun OPDO tiin ala hin yaadamu ture.Citiins miilla Kaffalew Tafarraa OPDOn ala hin ta’u ture.Kichuun Oromoo dabtara baatee kan conqolaafamaa ture sababa jireenya OPDOf ture.Mucaa ajjeesanii haadha irra teessisuun OPDOtiin ala hin ta’u ture.Walumaagalatti gidiraa uummati Oromoo arge hunda keessa dhaaba kanatu ture.Kanaaf uummati Oromoo hadheessatee balaaleffachaa ture.Kan ittiin hin jedhamne hin turre.
Artistoonni Oromoo akka gorsaattis hojii paartii kanaa fulaa fi fuulatti himuun adda duree dha.Fakkeenyaaf:
“Qaama kootu na gane /2/
Obboleessi koo horiin diinaaf na kenne”
“Biddeenni Oromoo furdaan utuu jiruu
Maaf kajeellaa dhaqxe mana Waddi Gabiruu” jechuun waan baay’ee kaasanii dhaabichi akka qalbii jijjiirratu yoo gorsan illee hin milkoofne turan.
Oromoon akka ergamaatti malee akka paartiitti ilaalee hin beeku. Lammaa Magarsaa garuu sana jijjiire. Gooftaan isaanii uummata Oromoo ta’uus labse.
Garuu sirba Kiilolee Malbaa Itiyoophiyaaf sirbee turen gidduutti isin afeera.
” Nagaatti Itiyophiyaa
Nagaatti haadha ormaa
Nagaa sitti dhaamti
Via: Tulluu Coqorsaa
እፀገነት ከበደ ትባላለች። ብዙ ጊዜ እነ ዳንኤል ክብረት እና ጋሻ ጃግሬዎቹ በሚያዘጋጁት የግጥም ምሽት ላይ ፅሁፎቿን ተጋብዛ በማቅረብ ትታወቃለች።
Aadde Qabbanne Waaqoo (Bonnie Holcomb) fi Irreecha!